एकैपटक मरेको होइन ऊ
बल्ल मरिसकेको हो
तर, मरिसकेपछि पहिलो पटक
थाहा पाउने व्यक्ति मै हुँ ।
पहिलोपटक मरेको थियो
जहाँ म बेरिएकी थिएँ कुनैबेला ।
उसको हृदयको चिसो लास
आफ्नै हृदयको चिहानमा दफनाएर
निस्किएकी थिएँ म
त्यतिबेला अचिनारूका फूलमालाले
भरिएको थियो उसको घाँटी ।
हृदयसँगै विस्तारै मर्यो
मैले पनि थाहा पाइनँ
थाहा पाउँदा फैलिसकेको थियो दुर्गन्ध
त्यति बेलै हो मैले थाहा पाएको
मष्तिस्कबाट निस्केको दुर्गन्ध
निकै लामो–लामो समयसम्म
निकै लामो–लामो दूरीसम्म
सार्वजनिक चिहानमा गाडिसकेपछि
सोच्दै–सोच्दै लामो समयसम्म हिडिरहें
‘मस्तिष्क मर्नु खतरनाक रहेछ’
आफ्नै परिवार भेला गरेर
भोज खाइरहेको थियो ।
यसरी नै मर्दै गएको थियो ऊ
र, बल्ल मरिसकेको हो केहीबेरअघि ।
अघिसम्म भीडले घेरिएको थियो ऊ
थिए त्यसमा उसलाई प्रेम गर्नेहरु
रोइरहेका थिए अलाल्लिएर
र, थिए घृणा गर्नेहरु पनि
थिएनन् तिनका पनि आँखा ओभानो ।
तर भीडबाट टाढा
मजस्तै नरूने झन् धेरै थिए
कति थेत्तरो बनाई दिएछ यो हृदय
उसको मृत्युमा पनि रून सकेनौं ।
यसरी अवसान भयो
अमेरिकी नाटककार इभ एन्सलरको नाटक ‘द भजाइना मोनोलग’को नेपालीकरण हो– ‘योनीका कथाहरू’ । यो नाटक अर्कै नाममा पहिले पनि देखाइएको थियो भन्ने त सुनेकी हुँ । तर हेर्ने अवसर भने पाइनँ । एकैचोटी यसमा भूमिका निर्वाह नै गरियो । यो नाटकको पछिल्लो मञ्चनको कथा भने ‘मडलेनाज नेपाल’सँग जोडिएको छ । ‘जिआइजेड’मा थिएटर हेर्ने जिम्मा लिएकी जुलिया विगत एक वर्षदेखि मण्डला थिएटरमै छिन् । उनी ‘मडलेनाज’ भन्ने समूहसँग आबद्ध रहिछन् । उनीसँगको सहकार्यको क्रममा नेपालमा पनि रंगमञ्चमा सक्रिय महिलाहरूको समूह बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो…
‘पहिचानबारे भ्रम चिर्न पुरस्कार’
नेपाली साहित्यमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी राशी भएको सीमित पुरस्कारमा यस बर्षदेखि ‘पहिचान पुरस्कार’ थपिएको छ । यो नेपाली साहित्यमा मुद्दालाई आधार बनाएर दिइनेगरी स्थापना भएको पहिलो पुरस्कार पनि हो । दुई लाख पाँच हजार राशीको यो पुरस्कार पहिलो पटक ‘फेरिँदो सौन्दर्य’ निबन्धकृतिका लागि राजन मुकारुङलाई प्रदान गरिँदैछ । राजधानीको मण्डला थिएटरमा आज (शनिबार) दिउँसो १ बजेपछि विशेष कार्यक्रमबीच प्रदान गर्न लागिएको पुरस्कारबारे पुरस्कार कोषका संस्थापकमध्येका एक, लेखक नरेश काङमाङ राईसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ -
🆀 यो कस्तो पुरस्कार हो ? 🅰 हरेक व्यक्तिको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार र उद्गम थलो हुन्छ । त्यसैको आधारमा उसको पहिचान निर्माण भएको हुन्छ । त्यो उसको एकल पहिचान हो । तर फरक–फरक पहिचान भएका मानिस मिलेर समाज बनेको हुन्छ, राष्ट्र बनेको हुन्छ । एकअर्काको एकल पहिचानको संयोजनबाट बहुल पहिचानसहितको समाज निर्माण हुन्छ । एउटा पहिचान कमजोर भयो भने उसले समाजमा अपनत्व अनुभूत गर्दैन । त्यसैले लेखनको माध्यमबाट सबैको एकल पहिचानलाई स्थापित गर्ने स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्न ‘पहिचान पुरस्कार’ स्थापना गरिएक…
‘नाटक त गर्छौ, तर कामचाहिँ के गर्छौ भाइ ?’
‘जीवन र अभिनयको सम्बन्ध कस्तो रहेछ ?’ रंगकर्मी विजय बराललाई मैले सोधेथेँ । उनको उत्तर थियो, उनलाई लाग्छ, ‘अभिनय जीवनजस्तै हुँदोरहेछ । त्यसैले कतिलाई त पागलझैं लाग्दोहोला हामी । त्यत्तिकै हाँसिरहेका हुन्छन्, त्यत्तिकै रोइरहेका हुन्छन् भन्दा हुन् ।’ वास्तवमै अहिले उनी त्यही अवस्थामा छन् । उनलाई सिजोफ्रेनिया भएको छ । मानसिक असन्तुलनको उपचार गराइरहेका छन् । तर वास्तविक जीवनमा चाहिँ होइन, नाटकमै । फागुन ७ गतेबाट मण्डला थिएटरमा मञ्चन सुरु भएको नाटक ‘बिल गेट्स पण्डित’मा उनी नाटक र जीवनका सन्तुलन मिलाउन नसकेर ‘सिजोफ्रेनिया’को सिकार भएको व्यक्तिको भूमिकामा छन् । नाटकबाट मण्डलाका प्रतिभा सुलक्षण भारतीले निर्देशनमा ‘डेब्यू’ गरेका छन् । लेखेका पनि उनैले हुन् । नाटक लेख्दा विजयको प्रतिभा, चरित्र, क्षमता र सपनालाई ध्यान दिएका छन् । त्यसैले नाटक हेर्दा लाग्छ, सुलक्षणले विजयकै लागि नाटक लेखेका हुन् । तथापि नाटकले सार्वभौम अर्थ दिन्छ, आफ्नो जीवन दर्शनसँग सम्झौता नगरीकन बाँच्न चाहने हरेक व्यक्तिले नाटकमा आफूलाई पाउँछन् । नाटकको ‘कन्टेन्ट’ अतिदार्शनिक र बृहत लाग्दैन । दैनिक जीवनका मसिना घटनामार्फत जीव…
‘नेपालमा कसलाई कम्युनिष्ट देख्नुभएको छ ?’
चार दशकदेखि लेखनका क्रियाशील रेशम विरहीको पहिलो निबन्ध संग्रह ‘देब्रे आँखा’ शिखा बुक्सले प्रकाशित गरेको छ । त्यसो त उनको कवि, पत्रकार र राजनीतिक अभियन्ताको छवि पनि छ । यसअघि नै उनको चार कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ । प्रस्तुत छ निबन्ध संग्रह वरिपरि रहेर उनीसँग गरेको बातचित-
🆀 लेख्न थालेको चार दशकपछि तपाईंको पहिलो निबन्ध कृति प्रकाशित भएको छ । चार दशक भनेका चानचुन समय होइन । किन यति लामो समय पर्खाउनुभएको पाठकलाई ? ➲ म फाट्टफुट्ट निबन्ध लेखेर साहित्यिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्ने कार्यमा त क्रियाशील नै थिएँ । लेखिरहेको थिएँ, छापिरहेको थिएँ, पाठकहरूले पढिरहेका थिए । तर, पुस्तकको रूपमा ल्याउन किन हो किन प्रकाशकले पत्याएनन् । यसपाली पत्याए, प्रकाशित गरिदिए । मैले अब पाठकहरूसँग कसरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिऊँ ।
🆀कृतिमै समेटिएको एउटा निबन्धबाट फुत्त नाम झिकेर किताबको नाम राख्ने सजिलो ‘काइदा’ पछ्याउनुभएन । र, कृतिको नाम राख्नुभयो ‘देब्रे आँखा’ । यही नाम रहनुको कथा भनिदिनुस् न । नाम रहनुको कुनै कथा छैन । आस्थाको दंश र त्यसले गरेको वैचारिक ध्वंसको जगबाट नाम उत्खनन गरेको हुँ ।
🆀 तपाईंको नाम ‘रेश…
‘प्रेममा जब स्वार्थ छिर्छ, तब कारोबारमा बदलिन्छ’
नर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सेन (सन् १८२८–१९०६) नेपाली साहित्य र रंगमञ्चका लागि परिचित नाम हो । अंग्रेजी साहित्यका विद्यार्थीले उनलाई पाठ्यक्रममै पढेका हुन्छन् भने उनका नाटक पुतलीको घर (अ डल्स हाउस), महान शिल्पी (मास्टर बिल्डर्स) र हेड्डा ग्याब्लर काठमाडौंको थिएटरमा मञ्चन भइसकेका छन् । २८ माघदेखि उनकै नाटक ‘पिलर्स अफ सोसाइटी’को नेपाली रूपान्तरण ‘समाजका नाइके’ शिल्पी थिएटरको गोठाले नाटकघरमा मञ्चन भइरहेको छ । इब्सेनको सिर्जन–जीवनमा ‘पिलर्स अफ सोसाइटी’ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । सन् १९७७ मा यो नाटक लेख्दा उनले १४ नाटक लेखिसकेका थिए । ती सबै पद्य संरचनामा थिए र कुनैले पनि अपेक्षित चर्चा वा सफलता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । झण्डै दुई बर्षको अवधिमा निकै पटक पुनर्लेखन गरेको यो नाटक भने ले गद्य संरचनामा लेखेका थिए । सामायिक यथार्थलाई चित्रण गरेर लेखिएको यो नाटकबाट उनको सफलताको ढोका खुलेको थियो । नाटक लेख्दा उनी जर्मनीमा थिए । सन् १८७७ को १४ नोभेम्बरमा ((शिल्पीले वितरण गरेको नाटकको ब्रोसरमा भने सन् १९६८ मा भनिएको छ । तर सन्दर्भस्रोतहरूमा सन् १९७७ भनिएको छ) यो नाटक पहिलोपटक डेनमार्कको ओडेन्स थिए…
दुई ठूला सम्भावना र कांग्रेस नेतृत्व मेरो बुझाइमा अबको चार बर्ष नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण रहनेछ । यसबीचमा दुई सम्भावनाबीच नेपाल रहनेछ । पहिलो, फेरि पनि इतिहासको क्रुर नियती दोहोरिन्छ । हाम्रो इतिहास छ कि हामी पटक–पटक आन्दोलनलाई सफल बनाउँछौं, तर आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउनै सक्दैनौं, संस्थागत गर्न सक्दैनौं । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो भयो भने यो संविधान कार्यान्वायनमा जान सक्दैन । संविधानका केही कोसेढुंगा छन्, यसले केही संरचना निर्माणको सर्त तय गरेको छ । त्यो बाटोमै जाँदैन र एकप्रकारको अस्थिरता सुरु हुन्छ । संविधानकै विरुद्धमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग यो वा त्यो बहानामा हुन्छ । नेपालक…
I love to read, write and observe.